Ku Hadlaada Luuqada Dhagaystayaashaada | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 1, 2010 Jimco, Oktoobar 1, 2010 Douglas Karr
Waxaa ku habboon oo keliya inaan qoro qoraal ku saabsan xiriirka oo fadhiya qolka shirarka ee Faransiiska. Xalay waxaan casheynay 8PM shirkad ku taal Le Procope, maqaayada ugu da'da weyn Paris (qiyaastii 1686). Waan faraxnay - makhaayadani waxay laheyd macaamiil sida Danton, Voltaire, John Paul Jones, Benjamin Franklin iyo Thomas Jefferson.
Waxaan ku dhibtoodnay waqti aan ku helno cabisyo halkan Paris (ma ahan wax aan caadi ahayn). Tagayaashu waxay ku yimaadaan oo ku baxaan markay ku habboon yihiin. Waxaan sugeynay nus saac ama wax ka badan hudheelka oo ilaaliyuhu wuxuu noo sheegay inaan aadno dhanka tagaasida oo koonaha geeskiisa ah. Hareeraha geeska faransiiska aad ayuu uga sii fogyahay geeska mareykanka. Waxaan lugeynay qiyaastii nus kiiloomitir wadada hoos ilaa isgoyska istaanka Taksiga. Halkaasna waxaan taagnay… 45 daqiiqo oo kale. Halkaa markay marayso casho ayaanu ka habsaannay oo wali maanaan tegin!
Taksikeenii ayaa aakhirkii soo muuqday, haweeney qurux yar oo faransiis ah oo gaariga wadata. Si xushmad leh ayay u waydiisay meesha aan usocono… “Le Procope” waanu ugu jawaabnay. Luuqada faransiiska waxay waydiisatay cinwaanka. Hore ayaan cinwaanka ugu diray taleefankayga laakiin kamaan helin oo ma aanan hubin - marka laga reebo in maqaayada uu hoos yimaado Louvre. 5-ta daqiiqadood ee soo socota waxaa si xamaasad leh loogu calaliyay ereyo aanan maqlin tan iyo markii ay Hooyaday ku qaylisay (iyadu waa Quebecois) iyada oo ilmo yar ah. Taksiilaha ayaa ku qeylinayay si cadaan ah, waan awooday inaan turjumo actually. "Makhaayado badan oo ku yaal Paris"…. "Ma waxay ahayd inay dhammaantood xafidnaato"…. Bill (aniga iyo ganacsade) aniga iyo madaxeena hoos u fadhiisanay, waxaan ku mashquulsanahay in aan xirno calaamadda wireless-ka oo aan helno cinwaanka.
Aniga oo walaacsan, waxaan weydiistay Bill cinwaanka. Wuxuu xasuustaa wax walba… waxay ahayd inuu tan xasuusto. Bill wuxuu i eegay anigoo walwalsan wixii ka baxsan raaxada wuxuuna bilaabay inuu ku celiyo waxa uu u maleynayay in cinwaanka uu yahay French Faransiis. “Maxaad iigu sheegaysaan af Faransiis? Kaliya u higgaad !!!! ” Wuxuu ku higgaadiyaa lahjad Faransiis ah… Waan dilayaa. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u eg nahay Abbott iyo Costello oo dabadayada laad ka qaadaya taksiile Faransiis ah oo xanaaqsan oo qiyaastii nus inaga ah.
Taksiilahayagii ayaa baxay! Waxay si xawli ah u kaxaysay… iyada oo qaylinaysa oo garaacaysa baabuur ama lugeeye kasta oo ku dhiirata inuu jidka u maro. Waqtigii aan garaacnay bartamaha Paris, aniga iyo Bill kaliya waan qosli karnay. Waxaan soo qaatay inbadan oo ka mid ah hadalkeeda… “madaxa ayey ka jiran tahay”… “cun”! markii aan sii dhex galnay iyo markii laga baxayay taraafikada.
Ugu dambeyntii, waxaan ka dhignay wadnaha Paris.
Taksiilahayagu ma ogeyn wadada (waxay ubaahantahay waddo isgoys), markaa wey na fasaxday oo waxay nagu tiri raadi. Waqtigan xaadirka ah, waxaan si la yaab leh ugu mahadnaqnay inaan nahay magaalada hoose, ammaan, oo xitaa qosolnay marka la eego masraxyada aan markhaati ka nahay. Waxaan u sheegay inaan ku jeclahay faransiiska, waxayna igu qarisay dhunkasho… waan sii soconnay.
Ama sidaas ayaan u fikirnay.
Waxaan ku soo lugeynay agagaarka iyo hareeraha magaalada saacada xigta ama sidaas… hada 2 saacadood ayaa ka soo daahday casho. Waqtigan xaadirka ah, waxaan rajeynay shirkadeenu inay bilawdo inay wax cunto cuno la'aanteena waxaanan go'aansanay inaan tuurno shukumaanka oo aan kaligeen cashada qaadano Taasi waxay ahayd markaan dhaafnay Tex Mex Indiana maqaayada… aniga iyo Bill waxay ahayd inaan labadeenaba sawir qaadanno.
Waxaan soo koobnay gees waxaana halkaas naga horreeyay Le Procope sharaftiisa oo dhan. Si deg deg ah ayaanu gudaha ugu galnay haweenaydii adeegtada ahaydna waxay noo sheegtay in shirkaddeenii ay weli halkaa joogto! Waxaan wadaagnay qosol badan markii aan dib uga sheekaynay dhacdooyinkii fiidkii. Casho ayaa layaableh, waxaanan yeelanay saaxiibo cusub.
Waxaa jiray casharro laga bartay, in kastoo:
Si aad si wax ku ool ah ula xiriirto dhagaystayaashaada, waa inaad ku hadlaan afkooda.
Si aad si wax ku ool ah ula xiriirto dhagaystayaashaada, waa inaad waliba fahmaan dhaqankooda.
Si aad u gaarto meesha aad u socoto, waxaad u baahan tahay si sax ah u ogaato meesha taasi waa - oo leh qeexitaanka ugu badan ee suurtogalka ah.
Ha quusan! Waxay kugu qaadan kartaa wax kabadan hal waddo oo aad ku gaari karto halkaas.
Taladani waxay dhaafsiisan tahay Faransiiska iyo Ingiriiska ama Faransiiska iyo Indiana. Waa sida aan ugu baahanahay inaan u fiirsano suuqgeynta sidoo kale. Si aan si wax ku ool ah ula xiriirno, waxaan u baahannahay inaan si sax ah u ogaano halka uu suuqeennu yahay, halka aan ka dooneyno inay joogaan, adeegsanno habab aan ugu wareejino si wax ku ool ah oo dabiici u ah iyaga, kuna hadalno luqaddooda - ma ahan kuweenna. Hadana haddii aadan isku xirin sida ugu horeysa, waxaa laga yaabaa inaad isku daydo siyaabo kale si aad fariintaada uga gudubto.
Hadaad layaabantahay… waxaan dib ulaabanay tareenka dhulka hoos mara oo aan dib ugu laabano hoteelka. 🙂
Tags: astaanta macaamiishadaraasadda suuq geynta dijitaalkanoocyada finchGanacsiga Xariifka ah ee IBMcilmi baarista suuqgeyntasahaminta suuq geyntanet oo lagu daray
Bilowga Toddobaadka - Beddelidda Dunida Hal Magaalo markiiba
Oktoobar 2, 2010 at 9:58 AM
Meesha aad qolka shirarka ku leedahay, waa inaad mid soo hindisataa. ” - Voltaire Finn.